तरुण दल दोलखाका उपाध्यक्ष तामाङमाथि सुतेकै ठाउँमा खुकुरी प्रहार, अवस्था गम्भीर – Medianp
तरुण दल दोलखाका उपाध्यक्ष तामाङमाथि सुतेकै ठाउँमा खुकुरी प्रहार, अवस्था गम्भीर
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २०, २०७५०८:५४0
दोलखा, २० साउन । नेपाल तरुण दल दोलखाका उपाध्यक्ष चित्र तामाङको ज्यान लिने प्रयास भएको छ । शनिबार राति घरमा सुतेकै ठाउँमा उनीमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो । खुकुरी प्रहारबाट तामाङको दाहिने खुट्टाको घुँडा र अनुहारमा गहिरो चोट लागेको छ ।
घाइते तामाङको चरिकोटको स्थानीय अस्पतालमै उपचार भएको छ । अहिले उनको अवस्था खतरामुक्त रहेको अस्पतालले जनाएको छ । तामाङमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने किशोर केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घाइते तामाङले आफ्नो खुट्टा छिनाउने गरी आक्रमण भए पनि संयोगले बचेको बताएका छन् ।
नेपाल तरुण दलले घटनामा संलग्न केसीलाई ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत कडा काबाहीको माग गरेको छ । तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले आक्रमणकारीलाई कसैको दबाबमा परी उन्मुक्ति दिने प्रयास भए त्यो आफूहरुले प्रतिवाद गर्ने बताए ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई लक्षित गरी ड्रोन हमला, राष्ट्रपति जोगिन सफल
घुँडा दुखेको अचुक औषधि हो कागती, यसरी प्रयोग गर्नुस् (भिडियो सहित)
लाखौंमा एक महिला हुन्छिन् सर्वगुणयुक्त, उनीहरुमा हुन्छ यस्तो विशेषता !
११ जनाले स्वीकारेन् सनीकी छोरी निशालाई ! आखिर किन ?